Ulaştırma Bakanlığı'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı Açıklaması | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulỌkwa ọkwa Haydarpaşa na Sirkeci Railway
22 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
njem njem nke Haydarpasa na Sirkeci ọdụ nkọwa
Minister nke Transportgbọ njem na akụrụngwa M. Cahit Turhan, TCDD General Directorate nke Haydarpaşa Gar mpaghara na mpaghara Sirkeci Gar maka ịgbazite akụkụ nke enweghị ọrụ, Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Ekrem İmamoğlu'nun kwuru nkwupụta maka okwu a.
Onye Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa M.Cahit Turhan kwuru;
“Daysbọchị ole na ole gara aga, esoro m na ụta na-eso nkọcha Maazị Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo nke Obodo isi obodo Istanbul, na mgbasa ozi ọha. Maazị Onye isi ala ewerela usoro iwu gbasara ụdị TCDD. N’ezie, anyị ga-azaghachi n’ime iwu.
Agbanyeghị, ọ ga-amasị m ịkọwara mba Turkish dị ọcha na ndị Istanbul, na-atụle ikike mmadụ niile nwere ịmata ihe ọ bụ. N'okpuru nduzi nke Onye isi ala anyị Recep Tayyip Erdoğan, anyị ejirila mkpebi na mkpebi siri ike na-ejere obodo anyị na mba anyị ozi.
Dị ka amaara, mpaghara ndị a kpọtụrụ aha n'ezie dị na Haydarpaşa na Sirkeci dị n'ime saịtị ahụ ma enwere ihe mgbochi na mpaghara zọpụtara. Emeghere ebe ndị a n'ihi mbelata agagharị na ndị njem mgbe ndị ọrụ Marmaray nyere iwu.
Iji nye TCDD ego ha nwere site na itinye aka na mmemme ọdịnala na nka nke ndị Istanbul, emere ihe nlere maka mpaghara ndị a. Emere ọmịiko ahụ dika usoro ịgbazinye mmadụ akwụkwọ nke TCDD si dị.
N'aka nke ọzọ, Maazị Mayor, tupu nchapụta ahụ, kwuru, "M ga-ewere nke a nkwụ ụgwọ n'agbanyeghị ụgwọ ọ bụla" na agbaghala asọmpi ahụ. Nke ahụ bụ; ebee ka onye ahụ bi na ya ga-enweta akwụkwọ ikike, ikike na akwụkwọ metụtara ọrụ a ga-arụ ebe a? Ebee ka akwụkwọ dị ka mmiri, ikuku sitere n'okike, na ebe ihe adịghị ọcha? N’ezie, si n’obodo anyị na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya… N’akụkụ a, itinye aka nke ndị isi obodo ukwu n’egwu ahụ kpalitere iwu asọmpi site na nmalite.
Ugbu a ana m ajụ gị otu o si bụrụ ihe dị mma maka ụlọ ọrụ ndị ha na IMS na-esonye na mbido a?
Ka anyị bịarute na nkwupụta Maazi Mayor na mgbasa ozi mmekọrịta… Nke mbụ, m ga-achọ ịkọwapụta na ihe kpatara eji kpochapụ ụlọ ọrụ obodo na nro emetụtaghị okwu ndị a kpọtụrụ aha na vidiyo ahụ bipụtara na mgbasa ozi mgbasa ozi.
E meelarịrị ọnọdụ dị nro n'ihu ọha. Tupu nro ahụ, a ga-eme ihe ndị achọrọ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ banye n'otu n'otu ma ọ bụ dịka nkwakọrịta ọnụ na-ekwupụta n'ihu ọha.
Companieslọ ọrụ ndị kwuru na Municipal enwebeghị ike imezu ihe ndị achọrọ n'otu n'otu ma ọ bụ dịka njikọta ọnụ.
Na mgbakwunye, agbanyeghị na okwu ndị açık jikọtara ọnụ na ọtụtụ ”akọwapụtara na nkọwapụta, agunyeghị nkwupụta a ma emezigharị ya na nchịkọta nke akwụkwọ ozi dị nro.
Dika nyocha a, Tender Commission kpebiri okwu ndị a niile ma wezuga nkwonkwo nke ụlọ ọrụ ndị isi obodo Istanbul Metropolitan guzobere.
Ọzọkwa, njikọta nke Mgbakọ na-ekwupụtala obere.
Ugbu a ana m ajụ onye ọ bụla nọ ebe a; O bu eziokwu na onye ntinye ahiri enweghi ike imezu ihe ndi di nro, ma obu na onye nturu ugo karie emeri usoro a?
Site ebe a, a na m ajụ Maazi İmamoğlu n'ezo n'ihu, onye anyị maara na isiokwu dị nro nwere mmasị pụrụ iche…
Nke mbu, o bu ihe kwesiri ekwesi maka ochichi nke IM, nke na - enweghi ike ikwadebe obuna akwukwo achoro ya na ya, na - anwa inweta onodu a? Ọ gbasoola usoro a na mmekọrịta azụmahịa ya ruo ugbu a?
Kedu ihe dị n'okike na nro ọ na-achọ ịbanye, karịa nke onye na-azụ ahịa nke 3 bidder bidere na nkwenye nkwenye ọchịchị ime obodo? Ọ bụ ihe nwute maka ọha na eze inweta uru dị elu?
Olmadan Enweghị ntozu, m na-abanye n’ịcha ọkwa, na-erughị ya; ị ga-enye m anụ nro ”ọ bụghị ya na-emegbu gị?
TCDD, 350 puku TL kama ụlọ ọrụ ahụ kwere nkwa ịgbazite, 100 puku puku TL na-agba aka na njikọta ọnụ, nke a dị nro, nke iwu kwadoro? Ọ bụrụ na TCDD mebere ihe ọzọ, ọ gaghị abụ mbibi ọhaneze? Nke a ọ bụ ụdị iwu na-akwadoghị n'aka ọha na eze ịnabata ya ma na-emebi ya?
Kedu ihe bụ mkpịsị aka, mkpịsị aka na-asọgharị na ikike ibute ọrụ, ọ bụrụ na nkọwapụta na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ ha tụrụ aro dị n'etiti na ihe niile doro anya, ma ọ bụrụ na ọ gaghị etinye aka na nrụrụ aka.
Ọ bụ ezie na IMM nwere puku kwuru puku ndị a iru, gịnị kpatara na ọ na-enye nsogbu Mr. İmamoğlu na a ga-ehiwe ọdịbendị na omenka ọgbara ọhụrụ maka abamuru nke ọha mmadụ na mpaghara isiokwu ndị dị nro?
TCDD; merela, kedu, kedu, kedu ihe kpatara ọ ga-eji mee dịka usoro iwu a siri dị.
Gịnị bụ ebumnuche Maazị Mayor iji mebie aha ọma nke TCDD, otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama nke obodo anyị?
nwekwara; Onye isi obodo nke Obodo isi obodo Istanbul chọrọ ka a kagbuo akwụkwọ nkwekọrịta maka ndị isi obodo. Otu udiri ihe a sitere na gọọmentị gara aga nke obodo mepere emepe nke obodo Istanbul. Ndị isi ọdụ ụgbọ mmiri ahụ n'oge ahụ rịọtara ka ekenye mpaghara nke ụlọ ọrụ Haydarpaşa na Sirkeci, mana TCDD anabataghị arịrịọ a.
Ọ bụrụ n’ilelee mba anyị anya taa, taa bụ ụbọchị ịdị n’otu mba na ijikọ ọnụ. N'ụbọchị ndị ahụ bara uru, Onye isi obodo enweghị ike ịnwa iduhie ọha na ndị obodo Istanbul site na-eduhie eziokwu na iwere ọtụtụ ndị ọka iwu.
Gini bu ebumnuche nke Onye isi ala iji nwaa ndi mmadu nsogbu site na nduhie nke eziokwu…
Ọ bụ akụkụ nke atụmatụ ịnabata ya na ọ nwara iduhie ndị Istanbul?
Na mgbakwunye, Achọrọ m ime ncheta ikpeazụ na achọpụtara m na ọ bara uru.
The Republic of Turkey bụ ọnọdụ nke iwu. A na - achịkwa ụlọ ọrụ anyị dịka iwu nke iwu si dị, ọ bụghị ịka ike. Nke a gụnyere obodo anyị. Beingbụ onye isi obodo anaghị enye onye ọ bụla nnwere onwe imebi iwu. Ndi isi obodo ma obu ala ugwu adighi iwu. Agbanyeghị, Maazị İmamoğlu, site na ịga na ndị isi ndị chụrụ n'ọrụ, gosipụtara usoro iwu na usoro iwu.
Ka onye isi obodo gafere ihe iwu kwuru, ọ pụtakwara iduhie ụmụ amaala o ji votu ya. Onweghi onye nwere ikike ime ya.
Na njedebe, ndị bi na Saint Istanbul!
Maazị Mayor, n’aka nke ọzọ, na-agbakụta atụmatụ a, ndị bi na Istanbul na Istanbul na-agbaso nkwa ndị ahụ ichefu… E nwere nkwa na okwu ndị dị ka metro na njem. Ebee ka okwu ndị ahụ dị?
N'ọnọdụ a, ewezuga ịmalite ọrụ ọhụụ, echere m na gị, ndị mmadụ dị oké ọnụ ahịa nke Istanbul, nwere ikike ịnwe ozi gbasara ịkwụsị nke ọrụ ndị emebere n'oge ọchịchị ime obodo gara aga.
N’oge ugbu a, mgbe anyị chọrọ ịdị n’otu na ịdị n’otu, ebumnuche na ebumnuche nke onye na-eme ihe na-akpa agwa na ọnọdụ nke enweghị ike ịrụzu ọrụ ha bụ ikesara vidiyo ndị nwere okwu ụgha na-ekwu n’ezigbo mgbasa ozi ma mee ka ndị anyị nwee ọgba aghara. M ga-ahapụrụ gị nnukwu clairvoyance na ferasetinize.
Nkọwa nke ụgbọ okporo ígwè Bolu-Eskisehir dị elu site na Ministry of Transport
Nkọwa nke Konya metro site na Ngalaba Ụgbọ njem
Nkọwapụta nke Eastern Express site na Ngalaba Ụgbọ njem
Nkwupụta Ulo nke Atọ nke Ministry of Transport
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Köprü Geçişlerine…